Jawaari Dhaqsi Haloo Gargaaro Jowhar & Hiiraan" Xasuuqii Ceel Garas Waa Caadi
02 May, 2013 in Wararka by Baidoanews Webmaster
Maxamed Cusmaan jawaari oo ah ninka ugu sareeya mudaniyaasha baarlamaanka soomaaliya maanta hadii si kale loodhigana inta dowlada ku jirto oo DM ninka ugu xil weyn ayaa waxaad moodaa inuu yahay qof u adeegaya beelo kale.
Maxamed Cusmaan jawaari oo ah ninka ugu sareeya mudaniyaasha baarlamaanka soomaaliya maanta hadii si kale loodhigana inta dowlada ku jirto oo DM ninka ugu xil weyn ayaa waxaad moodaa inuu yahay qof u adeegaya beelo kale. Jawaari ayaa maanta wuxuu ku dhawaaqey in si dhaqsi ah loogu gurmado dal iyo dibadba fatahaad uu sameeyey Webiga shabeele sida uu yiri kaasoo ilaa iminka aysan jirin dhibaato xoogan oo fatahaadaasi geystay.
Ina Cusmaan Jawaari wuxuu ku cel celiyey in dhaqso loo gurmado dadka Hiiraan & Jowhar laakiin wuxuu iska indha tirayaa in Dowlada uu madax ka yahay dad shacab ah, masaakiin ah, beeraley ah ay ku laaysay Ceel Garas Oo Bakool ka tirsan islamarkaana ay Boob ugeysteen askarta uu madaxda u yahay dhowr tuullo shacbka kunool ganacsatadooda.
Xitaa Jawaari in uu yiraahdo Dowlada arintaas waa ay baareysaa ayuu kasi waayey oo wuxuu utaagan yahay , dhaqsi hala gargaaro Reer Hiiraan iyo Jowhar, waana xaqiiq wax laga sugayey ileen waxaa xilka udhiibtey dad asalkooda kasoo jeedey Jowhar xilka ama Kursiga uu hada ku fadhiyo.
Hadaba Jawaari ayaa waxaa lagu eedeeyaa sidoo kale inuu Lacago laaluush xanibaad maamulkii Lixda gobol loo sameyn lahaa kasoo qaatay Bishii Janaayo Bartamaheeda Madaxweynaha Ismamaulka soomaalida ninka ay isku beesha dhow yihiin Gudoomiyaha Dhul Boobka Axmed Madoobe.
NB: Inta Dowlo ah soomalaiya soo martay ma jirin Qof Mas'uul ah oo tagay Jijiga Ee Maxay Aheyd wuxuu ka dooney Halkaasi?
wuxuu yiri waxaan kasoo baraneyney Maamul wanaag markii la weydiiyey waxa uu ka dooney halkaasi, adoo Dowladii guud wadan ah miyaa mamaul wanaag kasoo baraneysaa Maamul Goboleed waana Arin cajiib ah oo isweydiinteeda Mudan!.
waxaad ogsoon tihiin in ayadoo rajo wanaagsan laga qabey Gudigii Mamaul usameynta 6-da gobol ee DM oo Baydhabo ku shirayey uu si doqon ma garad ah arinkaasi ufashiley , wuxuu gudigii maamul usameynta howshooda ka dhigey iney ku mashquulaan Mamaulkii Gobolka oo yiri Hibil ayaan ku bedeley!.
Warbixino Xasaasi ah Oo Codad leh ,dukumiintiyo leh ka filo Barnaamijkii Taxanaha ahaa ee KEEROW